आफूले बिहे गरेको पुष्टि गर्दै प्रेमकथा सुनाइन्, को हुन् उनका पति ? - सिधा दृष्टी
सिधा दृष्टी बुधबार, साउन २२, २०७६ | August 7, 2019
स्पटब्वायलाई दिएको अन्तरवार्तामा राखीले भनिन् ‘म डराएकी थिएँ । हो मैले बिहे गरें । मैले मेरो बिहेको कुरा पुष्टि गर्छु । तपाइँहरुले पाएको जानकारी सही हो कि मेरा पति एनआरआइ हुनुहुन्छ । मेरा पतिको नाम रितेश हो र उहाँ बेलायतमा बस्नुहुन्छ
। उहाँ बेलायत फर्किसक्नुभएको छ । मेरो भिसाको प्रक्रिया चलिरहेको छ र छिटै म पनि बेलायत जानेछु ।’
राखीका अनुसार रितेश उनका फ्यान थिए र उनलाई ह्वाट्सएपमा म्यासेज गर्थे । उनीहरु कुराकानी बढ्दै जाँदा छिटै साथी बने । उनीहरुको भेट करिब १ वर्ष पहिले भएको थियो । रितेशले पहिले राखीलाई आफ्ना एक साथीसँग बिहे गर्ने ? भनेर सोधेका थिए । राखीले अस्वीकार गरिन् । राखीले भनिन् ‘मैले भनें कि मेरो मनमा घण्टी बजेन । त्यसपछि उहाँले मलाई सोध्नुभयो कि के मेरो लागि मनमा घण्टी बज्छ ? त्यसपछि मैले मलाई सोच्न समय मागें ।’ समय बित्दै जाँदा आफूलाई रितेशसँग प्रेम भएको र यो प्राकृतिक रुपमै भएको उनले बताइन् ।
घरमै बसेर अस्पतालको टिकट काट्न सकिने, मोबाइलबाट टिकट कसरी काट्ने ?
जेलबाट भाग्न महिलाको भेषमा
जलेश्वर । औरही बजारबाट प्रहरीले नेपाली नक्कली नोट सहित दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा बिहारको सीतामढी जिल्लास्थित परिहार ग्रामपञ्चायत वडा नं.१३ बस्ने शङ्कर रायका छोरा २२ वर्षीय पिन्टु कुमार र सोही ठाउँ बस्ने रामदयाल
छिमेकीले रड प्रहार गर्दा एक जनाको मृत्यु
चितवन । पूर्वी चितवनको राप्तीमा छिमेकीले रड प्रहार गर्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा राप्ती नगरपालिका–९ शितलपानीका ५९ वर्षीय कान्छा लामा रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार छिमेकी ५० वर्षीय दशरथ मल्लले शुक्रबार राति ९ः४५ बजे बाटोमा